VR - SHARRTZ.ORG
Student Show 2018 “A step to BIM World”
ဒီတစ်ခါ BIM+VR အကြောင်းလေး သိသလောက်ပြောပြပါမယ်။
BIM အကြောင်းကတော့ အရှေ့မှာ ပြောခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ VR အကြောင်းလေး နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
Computer နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ model ကို တကယ်ရှိနေသယောင် မြင်ရအောင် ဖန်တီးခြင်းတစ်မျိုးပါ။
VR က ဘယ်လိုကောင်းမွန်သလဲ?
VR က အခြေခံအပိုင်းအရဆို Presentation ပိုင်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ လက်ရှိမဆောက်ရသေးတဲ့ အဆောက်အဦးကို ကိုယ့်ရှေ့မှာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ရှိနေသယောင်မြင်ရတာဆိုတော့ fancy words သုံးမယ်ဆို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ Imaginary world တို့ dream world တို့ထဲ ရောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့ဗျာ။ အခုကျနော်တို့ သွားကြည့်မယ့် BIM model က တကယ့်အပြင်မှာ ဆောက်မယ့်အတိုင်း တည်ဆောက်ထားတာဆိုတော့ ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ခြံလေး မဆောက်ခင် လှည့်ပါတ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။
အလုပ်သဘောတရားတွေပါ ထည့်ပြောမယ်ဆိုရင် အဲ့ကနေပဲ model ကို checking ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။
အဲ့ဒီမှာ ကျနော်ပြောချင်တာက BIM model ကို VR နဲ့ပြတာ နည်း ၂မျိုးရှိတယ်။
1. Potential way
2. Kinetic way
Potential way ဆိုတာက သူ့ အဓိပ္ပါယ်အတိုင်း မရွေ့ဘူး။ ဘယ်လိုမရွေ့ဘူးလည်းဆိုတော့ ကြည့်နေတဲ့ မြင်ကွင်းက တစ်မျိုးထဲ။ ၃၆၀ တော့လှည့်ကြည့်လို့ရတယ်။ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ၃၆၀image ကိုကြည့်နေသလိုပဲ။ တကယ်လည်း သူက model ကနေ panorama view ဖန်တီးပြီး Image ထုတ်ထားတာပဲ။ အဲ့ Image ကိုကြည့်နေသလိုပဲ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ သိပ်မဆန်းလှဘူး။ ဒါပေမယ့် 1st experience တွေဖြစ်တဲ့ Client တွေကတော့ Impress ဖြစ်မှာပါပဲ။ နည်းပညာတွေက မြင့်လာပြီလေ။
ကျနော် သဘောကျတဲ့ နောက်တစ်နည်းက Kinetic way ပဲ။ ကျနော်တို့ ဆွဲထားတဲ့ model ကို view တစ်ခုထဲက မဟုတ်ပဲ အဲ့နေရာကို ရောက်ပြီး လှည့်ပါတ်ကြည့်နိုင်တာမျိုး။ ခြံထဲဝင်မယ် အိမ်ထဲဝင်မယ် လျောက်ကြည့်မယ်။ လှေကားပေါ်တက်မယ်။ အခန်းထဲတွေဝင်မယ်။ အိမ်သာထဲရောက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့တော့ မဟုတ်တာလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ VR ကြည့်နေသူအမြင်ကသာ အဲ့ကို ရောက်နေတာလေ။ တကယ့်လက်တွေ့မှာက မဟုတ်ဘူးရယ် 😂😂 ကျနော် Student’s Show မှာ အဲ့နည်းလေးနဲ့ ပြတုန်းက တချို့ကတော့ ပါတ်ဝန်းကျင်သတိထားမိတယ် တချို့က လျောက်သွားလျောက်လုပ်ကုန်လို့ လိုက်ထိန်းရသေးတယ်။ 😁 ဒါတောင် ကျနော် walk function နဲ့ မသွားထားပဲ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကြည့်တဲ့နေရာ တန်းရောက်သွားတာမျိုး လုပ်ထားတာ။ အဲ့တုန်းက Request တက်တဲ့ feedback လေးတွေလည်း သိမ်းထားပါတယ်။
ကဲ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ရော ဘယ်လိုအသုံးဝင်လည်း ပြန်သွားရအောင်။
Kinetic way က လုပ်ငန်းခွင်မှာဆို အတော်အသုံးဝင်တယ်။ ဆောက်နေရင်းဖြစ်ဖြစ် ဆောက်ပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ် အဲ့နည်းကို သုံးပြီး အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးကို X-ray ဖြတ်သလို layer တွေကြိုက်သလိုခွဲကြည့်လို့ရတယ်။ ceiling ကာနေလို့မပူနဲ့ ceiling ကိုဖြတ်ပီး အပေါ်က ပိုက်တွေကိုမြင်ရတယ်။ slab ကာနေလိုမပူနဲ့ concrete တွေဖယ်ပြီး သံချောင်းတွေ လှမ်းကြည့်လို့ရတယ်။ တကယ်ဆောက်မယ့်ပုံကဘယ်လိုလဲ On site မှာ ဘယ်လိုလွဲနေတာလည်း checking ဝင်လို့ရတယ်။ site engineer တွေ inspection သမားတွေအတွက် အတော်အသုံးဝင်သည်ပေါ့။
ကဲ VR ဆိုတာ မျက်မှန်လေးတပ်ရုံတင်မပြီး နည်းပညာလေးထပ်သွင်းရင် အရမ်းအရမ်းတွေ အသုံးဝင်ပါကြောင်း။ လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အဖြေလေးတွေ ရှာပြီး အသုံးဝင်ကြပါစေ ရည်ရွယ်လျက် 😄😄
Author Sharr Thet ZawPosted on December 6, 2019 Categories AR/VR, BIM, Knowledge, Technology and SocialTags BIM, Presentation Show, VR1 Comment on BIM + VR